Mahavariana, mampieritreritra… : dahalo… 100 lahy, nangalatra omby 800 | NewsMada
Mahavariana, mampieritreritra… : dahalo… 100 lahy, nangalatra omby 800
Tsy nisy fifandonana, tsy nisy maty na naratra fa dia nizotra soa aman-tsara tsy voaelingelina ireto dahalo efa ho 100 lahy nirongo fiadiana, nandroaka ny omby… 800 isa nangalarin’izy ireo, tao Tsimahabeomby, Ambatofinandrahana, afakomaly. Fa aiza loatra ny mpitandro filaminana amin’izany ?
efa ho rezimanta iray mihitsy. Nisy asan-dahalo mahery vaika nitranga tany Tsimahabeomby, any Ambatofinandrahana, ny alakamisy teo tokony ho tamin’ny 10 ora maraina. Araka ny fanazavana avy amin’ny zandary, omby 800 nentina mpivarotra omby avy any Manja ho any Ambatofinandrahana ireo. Noroahina vatan-dehilahy miisa 80 ireo omby ireo no notafihin’ireo andian-dahalo efa ho zato nirongo basy mahery vaika tany Tsimahabeomby. Araka ny fanazavan’ny zandary ihany, tsy nisy ny olona maty na naratra tamin’io fa nitsoaka ireo mpandroaka omby teo anoloan’ireo dahalo an-jatony nirongo basy. Nentina tany amin’ny kizo efa fitondrana omby halatra ireo omby 800.
Araka ny vaovao avy amin’ny zandarimaria ihany, nanao fanarahan-dia avy hatrany ny zandary avy amin’ny kaompania Ambatofinandrahana, nampian’ny avy any Amborompotsy, Ambositra, ny avy amin’ny vondron-tobim-paritra Amoron’i Mania ary ny polisy. Nanakana ireo kizo mety handalovan’ireo dahalo sy ireto omby marobe ireto.
Voalaza ihany koa fa efa nahetsika ny helikoptera any an-toerana. “Efa ampiasaina amin’ny fanarahan-dia sy ny hijerena ny lalana nitsoahan’ireo dahalo ny helikoptera”, hoy ny fanazavana.
Efa manerana ny faritra maro any ambanivohitra any ny tsy fandriampahalemana. Manjaka ny asan-dahalo toy ny any Bongolava, sns. Mahalasa saina ihany ny fahamaroan’ny dahalo indray manafika tahaka ity tany Ambatofinandrahana ity. Efa tafika iray mihitsy, ary azo heverina fa sarotra ny miady amin’izy ireo, sady mirongo basy. Aiza ho aiza ny mpitandro filaminana manoloana ireo dahalo anjatony ireo? Aiza ny miaramila, ireo napetraky ny fitondrana fa hiady amin’ny dahalo? Efa anjaran’izy ireo ny mifanandrina amin’ireto dahalo ireto, ary miandry azy ireo ny vahoaka. Tsy tongatonga ho azy ny fanafihana omby miisa 800 tahaka izao fa efa misy firaisaina tsikombakomba. Tranga avo lenta mampijaly ny mponina any amin’ny faritra any ny asan-dahalo, ary tsy voafehy izy ity, noho ny fisian’ny dahalo ambony latabatra ihany koa mifehy azy ireo. Mety ao amin’ny fitondrana ihany?
Une réponse à "Mahavariana, mampieritreritra… : dahalo… 100 lahy, nangalatra omby 800"
georges 13/05/2018 à 19:17
il y a bien quelqu’un qui est à l’origine des vols de zébus? quelqu’un de haut placé.il faut couper la tête du serpent et c’est tout?les zébus sont embarquer vers la chine.qui est leur complice?